अनौठो जागिर: लुगा नलगाइ घर सफा गर्ने कामदारहरुको खोजिमा युरोपका देश, घन्टाको ७ हजारसम्म तलब ! – Butwal Sandesh
अनौठो जागिर: लुगा नलगाइ घर सफा गर्ने कामदारहरुको खोजिमा युरोपका देश, घन्टाको ७ हजारसम्म तलब !
काठमाडौं । विश्वमा अनौठा किसिमका रोजगारीका अवसरहरु पाइने गरेका छन् । केहीले सुतेरै पैसा कमाउँछन् भने केहीले उभिएरै । अब बिदेशमा यस्ता कर्मचारीको मागमा वृद्दि भइरहेको छ कि जसले घरको सफाइ राम्रोसँग गरुन् । तर त्यसका लागि रोजगारी दिनेहरुको शर्त भने अनौठो खालको छ । उनीहरुले सफाई गर्ने युवा अथवा युवती ना*ङ्गै हुनुपर्ने शर्त राख्ने गरेका छन् । यसको कारण भने थाहा हुन सकेको छैन । युरोपका केही मुलुकमा नि*र्वस्त्र भएर घरको सफाइ गर्ने कर्मचारीहरूको माग बढिरहेको छ । कतिपय कम्पनीहरूले नि*र्वस्त्र भएर सफाइ गर्न चाहने कर्मचारीहरूको आह्वान पनि गर्न थालेका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा घर सफा गर्न लगाउने घरधनीहरूको स्वभावमा परिवर्तन समेत आउन थालेको छ । विगतका वर्षमा पातला युवतीहरू नि*र्वस्त्र भएर घर सफाइमा लागेकोमा अहिले घरधनीहरूले मोटाघाटा महिलाहरूको माग गर्न थालेका छन् । घरधनीहरू यस्ता सफाइ कर्मचारीलाई घण्टाको साढे ४ हजारदेखि साढे ६ हजार रुपैयाँसम्म तिर्न राजी छन् । पुरुष घरधनीहरू महिला कर्मचारी तथा महिला घरधनी पुरुष कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले मुलुक सं*कटमा पर्दा सरकारलाई करोडौं रुपैयाँको चेक बुझाएरमात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने बताएका छन् । मुलुकमा सं*कट पर्दा स्वदेशी उद्यमीले सहयोग नगरेको विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेपछि उनले किताब जात्रा नामक अन्तक्रिरयामा यस्तो बताएका हुन् ।
व्यवसायीप्रतिको अपेक्षा स्वाभाविक भए पनि गर्ने र नगर्नेमाथि समान व्यवहार नभएको उनको भनाइ छ । सरकारसँग मिलेर नै काम गरिरहेको र सरकारी अस्पताललाई पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।
अहिलेसम्म कुल २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको नभइ विभिन्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिररहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यसका लागि सहयोग गरेको र वातावरण बनाएको उनले बताए । ११९ वटा सेन्टरमा सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।सरकारी संयन्त्रले मात्र संकटमा जनताको सेवा दिन नसक्ने भएकाले आफूहरु जनतासम्मै पुगेर सेवा गर्न चाहेको उनले बताए । सरकारी संयन्त्रप्रति प्रश्न गर्दै उनले भने– भूकम्पका बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ छान्न ६ महिनाभन्दा बढी लगाउने संयन्त्रबाट के अपेक्षा गर्ने ?
सीजी फाउन्डेसनमार्फत अहिले पनि ४४ भन्दा बढी अस्पतालमा पीपीई पु¥याएको उल्लेख गर्दै टेस्टिङका लागि पाँचवटा सेन्टरमा प्राविधिक स्थापनामा सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेशहरुमा आफूहरुको सहयोग केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ छ ।लक्षित वर्गमा सहयोग केन्द्रित गरेका कारण सीजी फाउन्डेसनलाई सहयोगको प्रस्तावसमेत आइरहेको उनले बताए । ज्याक मा, बिल मेलिन्डा फाउन्डेसनको सीजीमार्फत सहयोग आइरहेको उनले जानकारी दिए । यो समाचार पाथीभरापोस्टमा छापिएको छ